Puntland Oo Ka Dhawaajisay Joojinta Ka Ganacsiga Iyo Dhoofinta Biraha Gaboobay – SBC
Puntland Oo Ka Dhawaajisay Joojinta Ka Ganacsiga Iyo Dhoofinta Biraha Gaboobay
Posted by Webmaster on November 30, 2011 Comments
Dowlada Puntland ayaa maanta ku dhawaaqday in la mamnuucay dhoofinta iyo ka ganacsiga biraha maarta ee loo yaqaan Iskaraabka kuwaasoo ay sheegeen in laga Ganacsado lagana dhoofiyo marsada magaalada Boosaaso .
Wasiirka Wasaarada Amniga Ee Dowlada Puntland Col Khaliif Ciise Mudan oo maanta shir jaraaid ku qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa uu Kaga warbixiyay safaradiisii ee uu dalka dibada kaga maqnaa isaga oo sheegay in ay ugu muhiimsanaayeen dhanka amniga waxaana uu xusay in caasimada muqdisho ay Kula kulmeen qaar ka mid ah masuuliyiinta DKGS ayna ka wada hadleen ka wada shaqaynta nabadgalyada iyo Dowlada puntland qaybta ay ku leedahay tababarada Ciidamada ay helaan waxaana uu sheegay in ay isla garteen.
Khaliif Ciise Mudan Waxaa kaloo uu sheegay in dowlada puntland ay tahay in lagu daydo xaga amniga iyo horumarka oo uu sheegay in maamulka uu wax badan ka qabtay Taas awgeedna ay tahay in lagu gacan siiyo.
Sidoo kale waxaa uu ka warbixiyay kulamo magaaladan boosaaso ay kula qaateen saraakiil ka socota hayadaha caalamiga gaar ahaan kuwa amniga ku shaqada leh oo uu xusay in ay ka wada hadleen sidii ay hayadahaasi ay doorkooda kaga aadan nabadgalyada uga qayb qaataan kuwaasoo uu sheegay in ay balanqaadyo arintaas ku aadan Soo gudbiyeen.
Ugu danbayntii waxaa uu wasiirku xusay in maanta magaalada boosaaso ay ku kulmeen gudiga nabadgelyada puntlan kuwaasoo uu sheegay in ay soo saareen goaamo ay Ka mid ahaayeen in la joojiyo ka ganacsiga iyo dhoofinta biraha loo yaqaan Iskaraabka oo lagu macneeyay in ay wax u dhimi karaan dhinacyada amniga iyo bilicda dalka.
waa talaabo wanaagsan hadaanahay ardayda soomaliyeed ee reeer puntland waxaan ka soo horjeednaa ka kanacsiga scrabka waaayo dalka ka maraarmo